Burkina Faso iyo Cameroon oo isku garab dhacay - BBC Somali
Lahaanshaha sawirka GABRIEL BOUYS
Image caption Issoufou Dayo oo u dabaaldegaya goolka barbaraha ee uu u dhaliyay xulkiisa Burkina Faso
Cameroon ayaa hogaanka qabatay daqiiqaddu markii ay aheyd 35 ee qeybta hore ee ciyaarta, markaa oo laad xor ah oo dhanka bidixe loo dhigay uu Benjamin Moukandjo uu u dhaliyay xulkiisa.
Labada kooxood ayaa fursado wanaagsan abuuray intii ay ciyaarta socotay, iyadoo fursaddii ugu wanaagsaneyd uu helay Clinton N'Jie kaasi oo meel aad ugu dhaw goosha kubadda ka helay balse cirka marsiiyay.
Xulka Burkina Faso ayaa ka faa'iidaysatay markii goolhaye Fabrice Ondoa uu soo tufay laad xor ah kaddibna uu sidaa shabaqa ku cuksiiyay Issoufou Dayo.
Xulka Cameroon ayaa dhowr jeer waxaa sigay ciyaartoyda Burkina Faso balse taasi waxba kama badelin natiijadii ciyaarta.
Dhanka kale ciyaartii middaasi ka horreysay ee isla Group A ee dhexmartay xulka tartankan martigelinaya ee Gabon iyo Guinea Bisau ee lagu dheelay garoonka kubadda cagta ee Stade de l'Amitie ee magaalada Libreville, ayaa iyaduna aheyd mid aad u xiisa badan kuna soo dhammaatay barbaro 1-1.